Unoda kukura #herbs nani gore rino? Our Amy ane dzimwe pfungwa zvikuru
Kukura makwenzi ane mukurumbira chitandadzo nokuda vezvokudya uye Chikwata zvakafanana. Ndinoreva asingadi pfungwa achifamba kunyika necheseri wako uye kucheka chero mushonga unofanira kuti Quick yenyu itsva kubva mubindu? Chimwe chinhu chakanaka kwazvo chine yemakwenzi ndechokuti vane yakaderera chaizvo Nokuraramisa zvinomera, izvo zvinoita ...
Kunyange kune uswa zhinji miti inogona kutamba mhepo yakachena, zvinobudirira bvisa basa indoor kusvibiswa, asi kuti yatainge tabva kugadziridza dzimba pasi nemakemikari kusvibiswa, Aloe, Chlorophytum, Sansevieria nezvimwe zvirimwa ndiyo inonyatsobudirira dzinongoitika deodorant. NASA masayendisiti pashure pemakore 20 R ...
More namagwatidziro pamusoro kukura miriwo
by pamusoro 18-03-05
Mari mumari kukura miti mumunda Kuomesa oregano: Danho nedanho mirayiridzo Plant imwe nedhiri nokuda swallowtail kungozvifunga Basil Our kufarira mhando
Herbs akura mumidziyo zvinoda zvakawanda fetiraiza pane avo akura mubindu. Nokuti havana nzira muzadze zvinovaka muviri vanoshandisa vakakwira sezvavanokura. Asi musafunganya, haufaniri kutenga chero chinoshamisira fetiraiza zvakananga mumidziyo yenyu, unogona kushandisa chete fetiraiza ...
Fetiraiza nokuti miriwo mapindu
Panyaya kukura zvokudya utano yako, zvakanaka kushandisa zviwanikwa, makemikari fetiraiza. Ndinoziva Organic zvegadheni anogona kuridza kutyisa, uye vanhu vanowanzofunga kusvika nokuti makemikari nhumbi nokuti zvinoratidzika nyore. Asi kushanda pamwe zvakasikwa, uye kushandisa makemikari fetiraiza mubindu hakusi chete utano ...
High yepamusoro ruva okutengesa
Nhasi, Shandong jinan erhuanxi mugwagwa vakawanda fu Lai ruva musika. Vanhu vakawanda kunyange vashanyi vakadirana kuna kusarudza uye kutenga nemaruva. Ms xue uye mhuri yake kusarudza uye kutenga nemaruva. Mushure "kutengeserana", MS xue achitenga dhishi mari chirimwa, vaviri dhishi shavishavi Orchid, matanhatu 10 azaleas. Sh ...
Sei tichiita emaruva? Matanho ari emaruva
Vanhu vanoda maruva ari ruva maberekero pane imwe nguva, unofanira bheseni maruva kuti kuvhiyiwa, kazhinji zviri bheseni zvinofanira kuitwa muna chirimwa wakaderera, mangwanani muchirimo nguva kupera February kusvikira mangwanani kufora, uyewo ava pakutanga yaApril, vakawanda chirimwa muviri anononoka, panguva t ...
Good poto seedling bheseni yakatama kubva chii nguva miti?
Qingdao Bo chete transplanting and fitow indasitiri & wezvokutengeserana co., LTD., Mashoko transplanting mangwanani, zvishoma wilting kunowanikwa. Kazhinji nemhaka transplanting mudzi hurongwa zvikuru kana zvishoma zvichashaya kubudikidza pfungwa, pashure transplanting, regai inotonhorera, ventilated nzvimbo anononoka mizambiringa yakabva kumwe mumazuva mashomanana, ca ...
Kunyange kune uswa zhinji miti inogona kunatsa mhepo, zvinobudirira kubvisa migumisiro indoor kusvibiswa, asi ari itsva Decorating dzimba nemakemikari kusvibiswa, Aloe Vera, bracketplant, sansevieria zvirimwa ndomumwe inonyatsobudirira dzinongoitika ingredients. NASA masayendisiti pashure anopfuura 20 gore ...
Zvinoreva ose maruva
Tulip rudo kureurura, nokukudzwa, chikomborero, Tulip nokusingaperi (Purple) Rudo kusingaperi, rudo Tulip (chena) mhosva, Tulip wakachena (blue) runako, rudo, mufaro Tulip (Red) Love kureurura, mufaro Tulip (tsvuku) zvinokudzwa, pfuma, upfumi Lily mvere, zvishuvo zvose huchizadzika, kuvakomborera Mafuta seruva yakaisvonaka, mupfumi, muchato ...